PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-13 - Masithembe ukuthi ivuleke amehlo iSafa
Masithembe ukuthi ivuleke amehlo iSafa
Isolezwe ngeSonto - 2019-01-13 - IMIBONO -
GINETHEMBA kumbe isifiso sokuthi lokhu kuhlabana
(kwami) kuzokhuthaza kuphinde kube isibuko kubona bonke abantu besifazane baseNingizimu Afrika abaphupha ngokuba ngabadlali bebhola elikhokhelayo.”
Ubonge kanje amukela imiklomelo yakhe emibili yokuba iCAF Woman’s Player of the Year noweCAF Goal of the Year umdlali weBanyana Banyana uThembi Kgatlana emcimbini obuseDakar, eSenegal, maphakathi nesonto.
UThembi akuyena yedwa onqobile kulo mcimbi njengoba nomqeqeshi wakhe eqenjini lesizwe, uDesiree Ellis, egoduke nomklomelo weCAF Coach of the Year.
Kube kuhle ukuthi lolu kuphinde kube wusuku okuchayiswa ngalo iSouth African Football Association (Safa) ebinesifiso sokusingatha imidlalo ye-African Cup of Nations 2019.
Kuzomele iNingizimu Afrika ipheze kulo mkhuba wokufuna ukugxumela amagwava aluhlaza nokuthatha izindlela ezinqamulelayo ebholeni. INingizimu Afrika isike yasingatha iWorld Cup, iConfederation Cup kanjalo nayo imidlalo ye-African Cup of Nations.
INingizimu Afrika ibiphakamise isandla sayo emuva kokuphucwa kweCameroon ilungelo lokusingatha le midlalo ngenxa yokungahleleki kwezinto.
Sekunesikhathi iNingizimu Afrika ihluleka ukudlala ize ifike esigabeni sokuthi ingene kulo mqhudelwano, kulokhu ibithembe ukuthi ukunikwa ilungelo lokusingatha izozingenela igijima kulo mqhudelwano, njengoba kwenzeka ngo-2010 kwiWorld Cup.
Ukunqoba kukaThembi noDesiree Ellis kuzomele kuvule amehlo eSafa ebholeni labesifazane njengoba kwavela ukuthi ibingabuthembi ubuholi bukaDesiree osenesicoco esiconselwa amathe ngabanye abaqeqeshi bamaqembu esizwe esifazane lapha e-Afrika.
Akukho olutheni olwenziwa yiSafa ukukhombisa ukuthi ilinakile ibhola labesifazane kuleli. Abadlali abaningi beBanyana badlala phesheya kwezilwandle, njengaye uThembi, ogijimela iHouston Dash yase-USA.
Mawavele amathuba okuthi badlale ibhola elikhokhelayo lapha eNingizimu Afrika. Sengathi isifiso sikaThembi sokuthi ukuwina kwakhe kugqugquzele abanye besifazane singafezeka.